Nepali Christian Bible Study Resources - रोमी १५:१७-३३
» अध्ययन मालाहरू » रोमीको टिप्पणी » रोमी अध्याय १५ » रोमी १५:१७-३३
पावलले जुन सुसमाचारीय सेवकाइ पूरा गरे त्यो सतही वा थोरै गहिराइको थिएन। उनको सन्देश न्यूनतम आवश्यकता भन्दा धेरै परसम्म पुग्थ्यो। उनले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिने क्रममा (प्रेरित २०:२४) उनी परमेश्वरको पूरा मनसाय बताउन अठोट गर्थे (प्रेरित २०:२७)। यो त वर्तमान समयको आत्माभन्दा पूरै भिन्न छ; आज केवल न्यूनतम कुराहरू मात्र प्रचार गर्नुपर्छ र विभाजन ल्याउने र अरूलाई चोट पर्ने शिक्षाहरू सिकाउनुहुँदैन भन्ने गरिन्छ। हाम्रा प्रभुले हामीलाई “मैले तिमीहरूलाई जे-जे आज्ञा गरें, ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाओ” भन्नुभयो (मत्ती २८:२०)। पावलको सुसमाचारीय सेवकाइ केवल खँदिलो मात्र थिएन, त्यो उल्लेखनीय गरी प्रभावकारी पनि थियो। उनको तेस्रो मिसनरी यात्राको समयमा एफेससमा पावलको बसाइको अवधि लामो थियो (प्रेरित २०:३१)। यस सेवकाइको असर कस्तो थियो? “अनि यो कुरा दुई वर्षसम्म भइरह्यो; यसो हुँदा एशियामा बस्ने सबैले - दुवै यहूदीहरू र ग्रीकहरूले - प्रभु येशूको वचन सुने” (प्रेरित १९:१०)। “यसरी परमेश्वरको वचन शक्तिसित बढ्दै गयो र विजयी भयो” (प्ररित १९:२०)। पावलले सुसमाचार पूरा गरे। उनले यस्तै अभिव्यक्ति कलस्सी १:२६ मा पनि प्रयोग गर्दछन्। उनको सेवकाइ भनेको “परमेश्वरको वचनलाई अर्थात् त्यस रहस्यलाई पूरा गर्नालाई” थियो।
के पावल कुनै समयमा स्पेन पुगे त? बाइबलले हामीलाई जवाफ दिँदैन। बाइबलभन्दा बाहिरका केही लेखहरू छन् जसले उनी स्पेन पुगेको सम्भावित सङ्केत दिन्छन्। “पावलले सारा संसारलाई धार्मिकताको प्रचार गरेपछि पश्चिमको पल्लो छेऊमा गएपछि...” (Clement of Rome, 1 Corinthians V.vii)। “पश्चिमको पल्लो छेऊ” भन्नाले सम्भवत: यूरोपको पश्चिमी भागहरूलाई देखाउँछ जसले स्पेनलाई पनि पूर्ण रूपमा सङ्केत गर्दछ।
पावल परमेश्वरको इच्छाद्वारा रोममा त आइपुगे तर उनले योजना गरे अनुसार चाहिँ होइन। मानिसले योजना बनाउँछ तर परमेश्वरले निर्धारण गर्नुहुन्छ। उनी रोमी कैदी भएर बन्धनहरूमा आइपुगे, तर यो परमेश्वरको इच्छामा थियो र “सुसमाचारका प्रगतिका” निम्ति थियो (फिलिप्पी १:१२)। पावल आनन्दसाथ रोममा आइपुगे। रोमका भाइहरूलाई पहिलोचोटि भेट्दा पावलले महसुस गरेको आनन्द प्रेरित २८:१४-१५ मा देख्न सकिन्छ। “ताजा हुनु" को अर्थ विश्राम गर्नु वा कसैको आत्मामा ताजा हुनु हो (थेयर)। यो कृयालाई (उपसर्गको प्रयोग नगरिकन) मत्ती ११:२८ मा प्रयोग गरिएको छ—“म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु”। “ताजा” शब्दको अर्थको निम्ति १ कोरिन्थी १६:१८; २ कोरिन्थी ७:१३; फिलेमोन ७,२० हेर्नुहोस्। पावल उनीहरूको निम्ति र उनीहरू पावलको निम्ति ताजा तुल्याउने आशिष हुनेथिए।
« रोमी १५:९ख-१२
रोमी १६:१-६ »